SPYV003 - OMG Digital Voice Recorder, Record 280 hrs, Battery 15 Hrs, 16GB - OMG Solutions
1. Mora ampiasaina sy manafina 280 ora horonam-peo fanoratana feo
Ny feon-kira vaovao noraisinay dia manana endriny tsara tarehy. Tena mora ampiasaina izany, Tsindrio fotsiny ny fiatoana amin'ny lafiny iray mba hanombohana ny fandraisam-peo. Izy io dia mirakitra afa-tsy rehefa mamantatra ny feo ary miato ny fandraisam-peo rehefa tsy misy feo.
Izy io dia mirakitra ao anaty horonantsary mahazatra CD miaraka amin'ny nitrate amin'ny 192kbps, izay manome anao an-tsoratra misimisy kokoa sy mazava kokoa raha oharina amin'ny hafa eny an-tsena.
Ankoatra ny fiainana bateria 15 ora dia ny fivarotana BIGGEST ity singa ity dia ny zava-misy izay afaka raketina raha efa nidirina izany.
2. Hetsika fanentanana feo
Ity fitaovana ity dia mandray an-tsarimihetsika an-tsarimihetsika, eny fa na dia eo am-pidirana aza. Ny fanamafisam-peo ny feo dia ahafahanao manalavitra fotoana lava mangina an-tsoratra ary mamonjy ain'ny fiainana an-trano.
3. Portable sy mora ampiasaina
Soraty ny fampiasana ny fanorenana ao anatin'ny batterin'i 15 ora ora na rehefa tafiditra ao anatin'ny rindrin'ny rindrina.
Azo raketina raha ampidirina ao anaty USB Wall Charger
MAC & PC Mifanaraka
Fotoana fanoratana: 280 ora
Battery fiainana: 15 ora
SHQ mpilalao horonan-tsarimihetsika, tahan'ny bitrindrana: 128 Kbps
Fichier de file: WAV
Fitaovana fiara: Fat 32
Operating rafitra: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8, Mac, Linux
Weight: mikasika ny 14g
1 x Bokikely fampianarana
6592 Total Views 1 Views Today